မြတ်နိုင် | လူသားတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် မှတ်တမ်းလေးတစ်ခု
* ဤသည်ရခိုင်သား……. ဤကားရခိုင်ပြည်
နှုတ်ခွေမွတ်ဟ …….. ဗျာဒိတ်ရသည်
ဗုဒ္ဓညွှန်ပြ ………. တိုင်းဓည…
* ကဗျဉ်းထိုးခြစ် ………… ပြန်ပြောင်းလှစ်သော်
စွန်းဝယ်လေးပါ ……….ကျင့်ဆယ်ဖြာနှင့် 
“အခုဆို ကျွန်တော့သားက အသက် ၁၃ နှစ်၊ အပြင်မှာတော့ ကျောင်း မထားတော့ဘူး။ အိမ်မှာပဲ ဆရာမနဲ့ သင်တယ်၊ ဒီလိုကလေးတွေက မိဘရဲ့ပြု စုစောင့် ရှောက်မှု အမြဲလိုအပ်နေတာကြောင့် မိဘတိုင်းက ကိုယ့်သားသမီးကို ကိုယ်မရှိ တော့ရင် ဘယ်လို ဆက်ရပ်တည်သွား မလဲဆိုတာ အမြဲပူပန်နေ ရပါတယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ အော်တစ်ဇင် အသင်းဝင် အော်တစ်ဇင်ကလေးတစ်ဦး၏ ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးနေမျိုးနိုင်က ပြောသည်။ (more…)
အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်များ အသုံးပြုရာ၌ အထူးသတိပြုသင့်သော လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ နံပါတ်တစ်အချက် ဖြစ်သည်။ မိမိ၏ လိပ်စာနှင့် ဖုန်း နံပါတ်ကို လူမှုကွန်ရက်တစ်ခုခုပေါ်တွင် လူအများကို ပေးသိထားမိသည်ဆိုပါက မမြင်နိုင်သော အန္တရာယ်ကို လက်ယပ်ခေါ်ထားမိသလိုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကံတရားဆိုသည်ကလည်း မည်သို့မျှမှန်းဆ ထား၍မရသည့် အရာ ဖြစ်သည့်အလျှောက် အကယ်၍ မိမိကသာ လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်များကို အလွယ်တကူပေးထားမိပါလျှင် (more…)
နည်းပညာရပ်များက တစ်နေ့နှင့် တစ်နေ့ပင်မတူ။ တိုးတက်ရွေ့လျားမှုသည် ခုန်ပျံနေသည့် အလား။ ၄င်းပညာနှင့်အတူ လူတို့၏နေထိုင်မှု ပုံစံ၊ သွားလာမှု၊ ဆက်သွယ်မှု၊ ဝတ်စား ဆင်ယင်မှုမှအစ အပြော အဆို၊ စကားလုံးအသုံးအနှုန်း အဆုံး အရာ အားလုံးသည် လျင်မြန်သောအဟုန်နှင့် ရွေ့လျားနေသည်။ (more…)
ထို့ပြင် အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၂၄ နှစ်အတွင်းရှိ အင်တာနက်အသုံးပြုသူ လူငယ်များ၏ လေးပုံ သုံးပုံခန့်သည် အွန်လိုင်း Profile တစ်ခု စီ အနည်းဆုံး ရှိနေကြသည် ဟုလည်း USA Today ၏ စစ်တမ်းထဲ တွင် ပါဝင်သည်။ (more…)
ဖြေ။ ။ “ယခုနှစ် နှစ်ဆန်း ၁ ရက်နေ့က သက်ကြီးပူဇော်ပွဲသို့ တက်ရောက်လာသည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရောက် ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ (ဓာတ်ပုံ – ငြိမ်းချမ်း/ ဧရာဝတီ)” ဆိုပြီး ဓါတ်ပုံအောက်မှာ အသေအချာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။ ဒါက သတင်းထောက်ဆိုသူက သက်ကြီး ရွယ်အိုပူဇော်ပွဲက ပုံကိုယူပြီး ဒီမှာလာ အသုံးပြုထားတာဖြစ်မှာပါ။ ပြည်တော် ပြန်ဖို့လျှောက် ထားသူ တစ်ဦးဦးရဲ့ ပုံကိုသုံးစွဲခြင်းက ပိုပြီးအကျုံးဝင်လိမ်ံမယ်လို့ယူဆပါတယ်။ ခုဟာက သတင်း ဖတ်သူတွေကို ထင်ယောင် ထင်မှားဖြစ်စေ ပါတယ်။ သတင်းထောက်ဆိုသူတွေရဲ့ အလေးထားရမယ့် ကိစ္စရပ် တခုပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ပြည်တော်ပြန်ဖို့လျှောက်ထားခြင်း တို့ ဘာတို့ မရှိဘူးခင်ဗျ။ သိရသလောက်က တော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်က စုစုပေါင်း ၆ ယောက် ခန့် လျှောက်ထားတာ ရှိတယ်လို့ကြားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ ရာနဲ့ချီရှိနေကြတာကို လူ ၆ ယောက်ရဲ့ဆန္ဒ နဲ့ နှိုင်းပြီး၊ သိမ်းကြုံးလို့ ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှရောက် မြန်မာများ ဆိုပြီး သုံးနှုန်းထားတာကလဲ ကလေ ကချေဖြစ်လွန်းလှပါတယ်။ သတင်းသမားရဲ့ဝတ္တရားကို အလွဲသုံးစား လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုး ဖြစ်တယ်လို့လည်း ယူဆ ပါတယ်။ (more…)
အဲဒီသုံးယောက်က အရှေ့တိန်မောနိုင်ငံရဲ့ သမ္မတဟောင်း Jose Ramos-Horta ၊ မလေးရှား အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် Anwar Ibrahim နှင့် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း Thaksin Shinawatra တို့ဖြစ်ပါတယ်။ (more…)
အာဂျင်တီးနားတွင် အသစ်ထုတ် ပီဆို ၁၀၀ တန်၌ သမ္မတကတော်ဟောင်း အီဗီတာ၏ မျက်နှာပုံထည့်သွင်း၊ အနှစ် ၂၀၀ အတွင်း ငွေစက္ကူ၌ အမျိုးသမီးပုံကို ပထမဆုံးအကြိမ် ထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်
ယင်းသို့ ထည့်သွင်းရခြင်းမှာ အီဗာသည် ပြီးပြည့်စုံသူ သို့မဟုတ် သူတော်ကောင်းတစ်ဦးဖြစ်နေ၍ မဟုတ်ကြောင်း၊ သူ့ကို ကြီးမြတ်စေသော၊ မေ့ဖျောက် ရန် မစွမ်းနိုင်သော အရာမှာ အီဗာသည် ပြည်သူများအတွက် နှိမ့်ချမှုရှိပြီး ထောင်လွှားမှု မရှိသူတစ်ဦးဖြစ်၍ဖြစ်ကြောင်း ဖာနန်ဒက်ဇ်က ငွေစက္ကူသစ် ထုတ်ပြန်စဉ် ပြောကြားခဲ့သည်။ (more…)
ခေါင်းတွင်တပ်ရသော ကင်မရာက မျက်လုံးလှုပ်ရှားမှုကို ဖတ်ကာ ကွန်ပျူတာ ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် စာထင်လာစေခြင်း၊ ပုံဆွဲနိုင်ခြင်းတို့ ကို ပြုနိုင်ပြီဟု သိရသည်။ ရောဂါကြောင့်ဖြစ်စေ၊ မတော်တဆမှုကြောင့်ဖြစ်စေ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမပြုနိုင်တော့ သူများအတွက် စီအင်န်အာအက်စ် အင်စတီကျုမှ ယန်းလောရင်းဆူကဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းစနစ်ကိုသုံးတတ်စေရန် နာရီဝက်မျ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှုသာလိုအပ်သည်ဟု ဆိုသည်။ (more…)
်ရေရှည်တွင် မတင့်တော်၍ စစ်တွေ၌ အရပ်ဘက် လုံခြုံရေးများကို ပြန်လည်ရုတ်သိမ်း
ပါရှားပင်လယ်ကွေ့နှင့် အာရေဗျ ပင်လယ်အတွင်း ဆီးဖောက်စ်ဟု အမည်ရသည့် မောင်းသူမဲ့ မိုင်းရှင်း ရေငုပ်သင်္ဘောကို ချထားပြီး ဖြစ်သည်ဟု ရေ တပ်အရာရှိတစ်ဦးက အေအက်ဖ်ပီ သတင်းဌာနကို ပြောသည်။ (more…)
အထူးသဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ယခုလက်ရှို ဖြစ်ပေါ်နေသောအရေးကိစ္စ၊ ပြဿနာများနှင့်ပတ်သက်၍ ငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့်နေ လိုကြလျှင် ဘင်္ဂလီမူ ဆလင်များအနေဖြင့် သူတို့၏ စိတ်ဓါတ်နှင့် ပြုမူနေထိုင်ပုံ များစွာကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ လိုပေ လိမ့်မည်။ ထိုအချက်များကို မပြုပြင်၊ မပြောင်းလဲသမျှ ကာလပတ်လုံး ရခိုင်တွင်သာမက မည်သည့်နေရာ၊ မည်သည့်ဒေသ၊ မည် သည့်မြေပေါ်တွင်မျှ နေထိုင်၍ အဆင်ပြေမည်မဟုတ်ပေ။ အဓိက အားဖြင့် ရခိုင်ပြည်တွင် နေထိုင်ကြသော ဒေသခံ ရခိုင်လူမျိုးများနှင့် ပြည်ပမှဝင်ရောက်လာသော ဘင်္ဂလီကုလားများအကြားတွင် အခြေခံ လူ့ အဖွဲ့အစည်း တည်ဆောက်ပုံနှင့် လူနေမှုစရိုက်ချင်း ကွာခြားသည့် အချက်ပေါင်းများစွာ ရှိနေသည်။ (more…)
အသုံးပြုလိုပါက ထိုင်းနိုင်ငံအနှံ့တွင်ရှိသော Seven Eleven စတိုင်းဆိုင်များ၊ တယ်လီဖုန်းအရောင်ဆိုင်များသို့ သွားရောက်ပြီး ငွေဖြည့်အသုံးပြုနိုင် သည်ဟု ကြော်ငြာထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ အနည်းဆုံး ဘတ် ၃ဝဝ ဖိုး ထည့်သွင်းရမည်ဟု ဆိုသည်။ ထိုပမာဏသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ဝ ဒေါ်လာနှင့် ညီမျှသည်။ (more…)
G-talk နဲ့ Mobile ဖုန်းခေါ်မယ် …….
အသုံးပြုနည်းကတော့ …. (more…)
ရင်နဲ့ သွေးတဲ့ ၀ါးချွန်များ
ဖက်ဆစ်ရဲ့ ခွေး၊ ရိုဟင်ဂျာရေးကို
နောင်လာမျိုးဆက်၊ သွေးနဲ့ ဆက်၍
၁၁ – ၆ – ၂၀၁၂
ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်း ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိသော ပဋိပက္ခကြောင့် ရခိုင် ဒုက္ခသည်များ စာရင်း RNDP မှ ထုတ်ပြန်
ကျေးရွာတွေကနေ စွန့် ခွာလာတဲ့ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ (ဓါတ်ပုံ)
စစ်တွေမြို့ မင်းဂံ အကွက်(၁) နောက်ဘက်ရှိ ဘင်္ဂလီရွာများမီးလောင်နေ (ကိုယ်တိုင်မီးရှို့ ခြင်းဟု သတင်းရ)၊ မင်းဂံမှ မိန်းမ ၊ ကလေးနှင့် လူအိုများ အား ဘေးကင်းရာသို့ရွှေပြောင်းနေ….. လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်များ ချပေးထားသော်လည်း အင်အားနည်းပါးသည်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရပါသည် (ကိုယ်တိုင် သွားရောက် သတင်းယူဆောင်ထားသဖြင့် သတင်းမှာ မှန်ကုန်မှုရှိပါသည်)
မင်းဂံမှာ ရွာသူ၊ ရွာသားများ နေအိမ်များအား စွန့် ခွာနေပုံတွေကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက် တာမန်မိုဟန်ဆင်းနှင့် ဇနီးတို့ မြန်မာ ပြည်သို့ သုံးရက်ကြာ ချစ်ကြည်ရေးခရီး လာရောက်ခဲ့စဉ် ကာလ အတွင်းနှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်စည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းများ အမြန်ဆုံးစတင်နိုင်ရန်အတွက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၅၀၀ ချေးငွေ ထုတ်ချေးရန် နားလည်မှု စာချွှန်လွှာကို မေလ ၂၈ ရက်နေ့က နေပြည်တော်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ (more…)